Cola ispredishithi kwi-AutoCAD, ehlaziya ngokuzenzekelayo-iGeofumadas
Agasti, 2017 AutoCAD-AutoDesk, Okufumaneka
Nangona thina ukuya ingongoma, ebonisa ukuba umrhwebi ongenisa Office isixhobo kunokunxulunyaniswa Excel spreadsheet fayile, okanye iLizwi, kwaye ihlaziywa ngamandla njengoko ifayile yokuqala ngayo, imbali Brendan Haggerty njengoko akhawunti yindlela ndiyithandayo ukuchaza geofumamos njani le sixhobo.
Kwisiqingatha sokugqibela se-2012, intlanganiso enokuthula yayibanjwe kwisixeko esincinci sogwini olusezantsi-mpuma e-United States. Akukho ziindaba ezivakalisileyo iintlanganiso. Kwakungekho ziintloko zorhulumente ezikhoyo. Iindwendwe ezona kuphela zazingabasebenzi bethu bezakhono zobugcisa. Umxholo wale ntla nganiso: AutoCAD kunye ne-Civil 3D.
Ukuphuhlisa isoftware yokunceda abasebenzisi be-CAD ukuba bonge ixesha, baphelise iintloko, kwaye bagoduke ngexesha yinjongo ekhokelayo kubo bonke abasebenzi beAxiom.
I-COO ye-Axiom ngelo xesha, isalathisi esinomtsalane nge-flash of intelligence insight emehlweni akhe, kwaye iqela lakhe labaqulunqi bezakhono liyazi ukuba abasebenzisi be-AutoCAD bafuna uncedo. Ukongezelela, kwakukho inani elikhulayo labasebenzisi be-MicroStation abafuna ukuba senze izixhobo zethu zifumaneke kubasebenzisi boBomiCAD kunye ne-Civil 3D. Ixesha lifikile ekukhanyeni indlela ye-AutoCAD / i-Civil 3D kwaye uqale ukudala ii-Axiom versions ze-AutoCAD kunye ne-Civil 3D kwizixhobo ezithandwa kakhulu ze-MicroStation. Kodwa kwakungenakwenzeka ukudala zonke izixhobo ngexesha elilodwa, ngoko kufuneka kube ngowokuqala? Kwakukho imfuneko eninzi yezixhobo ezininzi ezahlukahlukeneyo ezabonakala ngathi zinzima ukukhetha, ekuqaleni.
Impendulo yayikukuba kufuneka ibe sisixhobo esinika uncedo olukhulu kunabo bonke (kulinganiswa ngethuba lokulondoloza kunye nokunciphisa ukukhungatheka okwenziwe) kubaninzi kunani labasebenzisi. Emva kokuba le nto isungulwe ngendlela ecacileyo, wonke umntu okhoyo uqonda ukuba Microsoft Office Importer ™ I-AutoCAD kunye ne-Civil 3D kufuneka ibe ngowokuqala. Ezinye izixhobo ze-Axiom zokuthandwa okufanayo zazisondela, kodwa akungabazeki ukuba Microsoft Office Importer kuya kunceda inani elikhulu labasebenzisi ngexesha elifutshane.
Abasebenzisi be-MicroStation - abajwayele ukusebenzisa Microsoft Office Importer ukuhlanganisa ii-spreadsheets ezinkulu ze-Excel kwi-MicroStation ngefomathi epheleleyo kunye nekhonkco evumela ukuba ubuyele kwifayili yomthombo ukuze idatha ye-DGN ingagcinwa ngokuzenzekelayo ngokutshintshwa kwifayile yespredishithi - Bafuna ezi zinto zifanayo kwi-AutoCAD kunye neeprojekthi ze-Civil 3D.
Abanye abathengi babebuhlungu, kwaye kufanelekile. I Microsoft Office Importer yenza ubomi be-MicroStation abathengi belula, kodwa xa bekufuneka benze iiprojekthi kwi-AutoCAD okanye kwi-Civil 3D, babesenamathela ngokusetyenziswa kwezixhobo zokunamathela ezingabonakaliyo. Iminyaka esebenzayo Microsoft Office Importer MicroStation wabonisa indlela izinto ezilungileyo onokuzisebenzisa ingxaki ezicacileyo kakhulu iiprojekthi zabo AutoCAD kunye 3D Civil kunye nokumisa ukuba kukho igumbi kakhulu ngcono xa kwathi ukucola spreadsheets DWGs zakho.
Ingaba ngaba abasebenzi bezobuchwepheshe be-Axiom bajonge ukuba aba basebenzi baphile ubomi obulula kwiiprojekthi zabo ze-MicroStation kunye Microsoft Office Importer, ukuze bavumele ukuba bazibhokozele kwi-AutoCAD kunye neeprojekthi ze-Civil 3D?
Isikhathi sokufikelela emsebenzini
Kwaye kuya kuba njalo: iqela lethu lophuhliso liza kudala i-software yabo yokuqala ye-software eyi-Autodesk kwaye oku kuya kuba Microsoft Office Importer.
El Microsoft Office Importer I-AutoCAD kunye ne-Civil 3D iya kuxhamla kwiminyaka yokuphucula, ijoliswe kumthengi, eyenziwe kuyo yonke imiba Microsoft Office Importer ye-MicroStation okoko yaqalwa ngo-1996. Ifomathi yayo iya kuba yegqibeleleyo, ngenxa phantse yamashumi amabini eminyaka yokuphuculwa kwinguqulelo yeMicroStation.
El Microsoft Office Importer I-AutoCAD ingaba nempawu abasebenzisi bokwenene abayiyifuna ngokwenene, ngenxa yeminyaka elishumi elinesibhozo yempendulo evela kuyo (ngobukhulu kunye nomgangatho) isiseko somsebenzisi we-MicroStation.
Ukubeka nje, i Microsoft Office Importer I-AutoCAD kunye ne-Civil 3D iza kuzaliswa kwaye ziyakwazi ukunceda inani elikhulu labantu ngokukhawuleza. Iminyaka yokukhula kakubi kwakungekho mfuneko yokuphindaphinda.
Iqela elincinci lophuhliso lahlanganiswa. Le projekthi kuya kufuneka ibhabhe phantsi kwe-radar ngaphandle kokufunyanwa, ekuqaleni. Ukuba abathengi bayakufumanisa okuzayo, ukulinda kunokuba nzima ngakumbi kubo. Imibuzo engapheliyo enje "yenziwe ngoku?" kwaye "Iya kuba ilungile nini?" Abathengi abanomdla banokuthi baphazamise uphuhliso kunye nabasebenzi ekufezekiseni injongo: ukufumana iimveliso ezandleni zabathengi.
Yonke eyasalayo yayikukuzaliseka. Uphuhliso lwe-AutoCAD lunemiqobo yalo. Ngethamsanqa, iqela lophuhliso alikwazanga ukuphuhliswa kwe-AutoCAD. Ngethuba elipheleleyo loveliso lwe-AutoCAD lophuhliso kunye ne-40 yeminyaka yovavanyo lwentsebenzo lwe-CAD phakathi kwamalungu amathathu ekomiti eliphambili, sasifikile emsebenzini.
Kwaye, njengoko besithi, iinyanga ezithoba emva koko Microsoft Office Importer I-AutoCAD kunye ne-Civil 3D yazalwa. (Enyanisweni, bekude ixesha elide, kodwa le nto ayithandi kakhulu.)
Inguqulelo yokuqala Microsoft Office Importer I-AutoCAD yazalwa ngenkxaso yokuncamathisela zombini i-Excel ispredishithi kunye namaxwebhu eLizwi kwiifayile ze-DWG. Ngoku kwakungekho lula ukunamathisela isixa esikhulu solwazi olufomathiweyo lwe-Excel kunye neLizwi kwi-DWG ngesenzo esinye, kodwa idatha ibigcinwa ihlaziyiwe ngokwendalo notshintsho olwenziwe kwiifayile zokuqala ze-Excel okanye zeLizwi kwi ikamva. Iifayile ze-DWG ziya kuhlaziya ngokuzenzekelayo, nanini na zivulwa, ukubonisa utshintsho olwenziwe kutshanje kwiphepha okanye kwisicatshulwa. Abasebenzisi akufuneki nokuba bakhathazeke ngokukhumbula ukujonga uhlaziyo.
Microsoft Office Importer I-AutoCAD ivumela abasebenzisi ukuba banamathele ngokupheleleyo amafespredishithi afanelekileyo afomathiweyo kwiifayile zokudweba kunye neikholomu ezihlala zilungelelwe ngokukhululeka kwangoko.
Zihambile iintsuku ezilusizi xa abasebenzisi be-AutoCAD kuye kwafuneka bahlawulise nantoni na eyakhelwe kwi-AutoCAD yokuncamathisela iishedyuli zabo, izishwankathelo, amatyala ezinto, ubuninzi kunye nezinye izipredishithi ze-Excel okanye amanqaku abo ngokubanzi asuka kumaxwebhu eLizwi kwiifayile zabo ze-DWG. . Kananjalo idatha edluliselwe kwi-DWG (kusetyenziswa i-AutoCAD yemveli Cola umyalelo) ayifomathiswanga ngokuchanekileyo, ukuba imiqolo esandula ukwandiswa kwiphepha elibonakalayo ayinakubonwa kwi-DWG, kwaye amakhonkco abo awasebenzi nje.
Oko kusilethela kwiintsuku zethu: i Microsoft Office Importer ngokuba AutoCAD and 3D Civil isetyenziswa yi abaxumi bethu ehlabathini lonke ukuze ukuguqula iishedyuli yokungenisa kunye nezinye spreadsheet Excel kunye ulwazi oluvela amaxwebhu lweWord iifayile zakho DWG inxaxheba kwimisebenzi bakwelona. Ukusebenzisa ongenisa Microsoft Office ngamava ophezulu ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni ekufuneka kubonakala kuya kuthakazelelwa.
Ngeembono eziphambili zabasebenzi bethu abaphezulu bezobugcisa ukuxhasa abasebenzisi be-AutoCAD ukunciphisa ixesha lokusebenza, ukukhungatheka kunye nomsebenzi ophindwe kabini, ngendlela abaye banceda ngayo abasebenzisi be-MicroStation kwiminyaka emithathu edluleyo, andinako kulinda ukubona ukuba yintoni iqela lophuhliso apha kwi-Axiom elandelayo.
Jonga ngokwakho Zama Ofisi yoMthumeli ukhululekile namhlanje!
Ukucwangcisa umboniso wamahhala, ukubonakalisa i-intanethi okanye ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga ne-Office Importer, gcwalisa ifom, kwaye umntu uza kukuqhagamshelana nawe.
[Idilesi yefowni-7 id = »20743 ″ isihloko =» ContacAxiom »]
Post edlulileyo«Ngaphambilini ubonwa Uhlalutyo Earth umfanekiso ngexesha lenene kwibrawuza: LandViewer
Post Next 3 27 evela 2.18 QGIS utshintshoOkulandelayo »